निसान पल्सर Gti-आर एक कार, कार 1990 र 1994 साल बीच जापानी निसान उत्पादन कि कम्पनी हो। यो निसान पल्सर सिरियल नम्बर को मोडेल मध्ये एक छ - 3-ढोका hatchback, तर स्पष्ट Gti-आर ठूलो पछिल्लो भाग र सुविधा को हुड मा हावा intakes। वाहन टर्बो आधारित ATTESA 4WD संग चार पाङ्ग्रा ड्राइव नियन्त्रण छ। साथै, यसको अद्वितीय मोटर SR20DET कुनै पनि अन्य कार मा स्थापना गरिएको छैन। यो मोडेल जापानी avtoklmpaniya उत्पादन मा शुरू, विश्व च्याम्पियनशिप र्याली, Avtosprota को अन्तर्राष्ट्रिय संघ द्वारा आयोजित भाग लिन सक्षम हुन।
निसान Gti-आर यस्तो उदाहरण रूपमा, वाहन को वर्ग संग एक बराबर छ, फोर्ड एस्कर्ट Cosworth, सुबारु IMPRESA WRX, टोयोटा Celica GT4, मित्सुबिशी लांसर विकास, र Lancia डेल्टा Integrale।
त्यहाँ सामान्य सार्वजनिक गर्न बेचिन्छ कार को दुई फरक मोडेल थिए। कुनै बाह्य दृश्य मतभेद छ देखि तथापि, तिनीहरूले पहिचान गर्न सकिन्छ मात्र VIN-प्लेट मा नम्बर द्वारा।
- आरए मोडेल:
मोडेल नम्बर EBYNR वी FN14xxxx। यो वातानुकूलन, बिजुली Windows र दर्पण एक सामान्य सडक कार छ। अगस्ट 1992 देखि निसान जो मार्फत यो श्रृंखला को पृष्ठभूमिमा विरुद्ध अत्यधिक देखिने भएको छ मोडेल, को भित्री सजावट केही कस्मेटिक परिवर्तन गरे।
- आरबी मोडेल:
मोडेल नम्बर EBYNR आर FN14xxxx। यो थियो एक लक्जरी finishes, वातानुकूलन, बिजुली Windows र 30 किलो द्वारा यसको वजन कम जो जस्तै। लक्जरी सामान केही अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध छन्। इन्जिन को आरए मोडेल मा जस्तै थियो, तर त्यहाँ यस्तो रूपमा केही यांत्रिक परिवर्तन, थिए मार्गदर्शन प्रसारण।
Nismo केही परिवर्तनहरू (उदाहरण, निलम्बन, सिट, सुरक्षा पिंजरे र footrest लागि) संग, मा मोडेल निसान पल्सर Gti-आरबी आधारित पूर्ण कार को संस्करण प्रस्तावित। व्यक्तिगत विशेष Nismo VIN-प्लेट मा संख्यात्मक सबै जो 21 कार, को कुल को उत्पादन पुष्टि। तिनीहरूलाई केही, प्रचार वाहन रूपमा प्रयोग गरेका थिए अरूलाई निजी ग्राहकहरु आदेश थियो।
- ग्रुप एक:
यो समूहको कार र्याली गर्न अभिप्रेरित र सामान्य सार्वजनिक बेचिएको थियो। 1991 र 1992 मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु मा भाग।
घाम - विभिन्नता निसान पल्सर 1998, युरोपेली बजार को लागि विशेष उत्पादन। त्यो अर्को चेसिस नम्बर (EGNN14), र दुई स्टीयरिंग विकल्प थियो: दायाँ र बायाँ। इन्जिन क्षमता यस विशिष्टीकरण को पल्सर भन्दा अलि सानो थियो। यसबाहेक, सनी Gti-आर यस्तो घेर पछिल्लो दर्ता प्लेट र पछिल्लो रूपमा पल्सर बढी शारीरिक मतभेद थियो कुहिरो रोशनी।
निसान पल्सर 1978 देखि 2007 को अवधि मा जापान गरेका थिए। Gti-आर पनि (आयरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल, लेबनान, नर्वे, स्वीडेन, आइसल्याण्ड, त्रिनिदाद, बार्बाडोस, जमाइका, सिंगापुर, मलेसिया, जिम्बाब्वे, को क्यानरी टापु र रूस सहित) धेरै अन्य देशहरूमा उत्पादन।
पल्सर प्रतिस्थापित निसान Tiida hatchback र पालकी Tiida Latio।
नाम निसान पल्सर विश्व बजार फर्के छ फेब्रुअरी 30, 2013। यो 4-ढोका पालकी, थाइल्याण्ड गरे। यो तीन मोडेल उपलब्ध छ। ST-एल, र लक्जरी मोडेल - - तिवारी आधारभूत ST, मध्य-सीमा भनिन्छ।
क्षणमा, संसारभरि यसलाई क्लब मालिक र उत्साही निसान पल्सर धेरै सिर्जना गरियो। 1993 मा जापान - तर, तिनीहरूलाई को पहिलो निसान घर मा देखियो।
कति दिन पछि तपाईं एक महिना पछि गर्भवती प्राप्त गर्न सक्छन्? कति छिटो तपाईं एक महिना पछि गर्भवती प्राप्त गर्न सक्छन्? एक महिना पछि गर्भवती बन्ने मौका
एयर चकलेट: क्यालोरी, उपयोगी गुण, लाभ र हानि
कुत्तों मा रब्स: लक्षण र लक्षण
Motoblocks लागि mowers, छनौट
मर्सिडीज बेन्ज SLS AMG - जर्मन खेल कार को सबै भन्दा शक्तिशाली सुविधा
उपयोगी गुण धेरै थाह Daikon
आफ्नो हातले फर्नेस सडक। ईटा को बाहिरी ओवन-ग्रिल-धुवाँ घर
स्यालले खाने? के जाडो मा जंगल मा एक स्यालले खान्छ?